Tag: Midowga | Sagal Radio Services
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya oo ka qeyb galay Kulanka Golaha Guud ee Midowga Afrika
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa ka qayb galay shirka Golaha guud ee Midawga Afrika oo maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia.
Midowga Yurub oo shir deg deg ah ka leh ka bixitaanka Britain
Madaxweynaha golaha Yurub, Jean-Claude Juncker, waxa uu sheegay inuu doonayo in la dedejiyo billaabidda wadahadallada Britain ay uga bexeyso midowga Yurub.
Ururka Midowga Afrika oo Wakiil Cusub u soo Magacaabay Arrimaha Soomaaliya
Ururka Midowga Africa ayaa wakiilkooda Somalia u soo magacabaay, Danjire Maman Sidikou, kaddib markii uu iska-casilay xilka danjirihii hore ee Midowga Afrika, Maxamed Saalax Anaadiif bishii lasoo dhaafay isagoo aan sheegin sababta rasmiga ah ee uu xilka isaga casilay.
Midowga Africa oo canbaareeyay weerarkii shacabka halay ka dhacay Baladweyne ee ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 18 tira intaasi ka badana ay ku dhaawacmeen.
Sagal Radio Services • News Feature • October 20, 2013
Wakiilka gaarka ah ee midowga afrika u qaabilsan soomaaliya,ahna madaxa AMISOM Ambassador Mahamat Saleh Annadif ayaa cambaareeyay qaraxii maata lagu xasuuqay dad shacab ah ku sugnaa maqaayad ku taala bartamaha magaalada b/weyne ee xarunta gobolka hiiraan.